Vintage E-igwe ịnyịnya ígwè Manufacturers & Suppliers - China Vintage E-bike Factory
SEBIC ọhụụ ọhụụ nke obodo ọgbara ọhụụ 36V 250W 700C enduro retro electric bike
Usoro PAS Usoro ọgụgụ isi nwere ike inye aka bụ teknụzụ patented nwere ike ime ka ọnụọgụ ikike nke ike karịa karịa 83% wee gbasaa ọrụ nke moto na batrị n'ụzọ dị irè.
SEBIC 700c kpochapụwo agagharị diski breeki n'okporo ụzọ obodo ebike
Nwee uru niile nke ịgba ịnyịnya ígwè na-enweghị nsogbu na SEBIC 700RM Electric Hybrid Bike. E-bike 700RM nwere igwe elekere 500-watt na-enyere aka ebe a na-akwọ ụgbọala nke na-enye gị ohere ịgbago ma jiri ugwu dị elu gafere. Naanị họrọ ogo enyemaka gị na njikwa mkpịsị aka ukwu na pedal dị ka o kwesịrị.
SEBIC 26 nke anụ ọhịa ahụ na-ewu ewu n'okporo ụzọ egwuregwu ụdị ike dị elu eletriki eletriki eletriki
Ahụmahụ ịgba ígwè na a ọhụrụ ụzọ na 26 nke anụ ọhịa ahụ Electric Bike na Black. Gbọ ịnyịnya ígwè a na-agba ọsọ ọsọ ọsọ 7 nwere ihe aluminom na nke a na-agba ọsọ ga-eme ka ị gaa ebe ọ bụla ịchọrọ ịga nke ọma. Ọ nwekwara n'ihu na azụ disk brekị. E-bike a na-abịa na batrị (ike nke 13Ah) na chaja.
SEBIC 700C alloy alloy 6061 igwe eletrik dị ike
Nwee obi ụtọ n'èzí na uru ahụike nke ịnya igwe, na-enweghị ụfọdụ nsogbu nsogbu dị ka ịrị elu ugwu na ogologo oge njem, yana SEBIC e-Bike. E-Bikes a nwere moto na batrị abanye n'ime igwe kwụ otu ebe.
SEBIC 26 inch lightweight retro europe vintage igwe kwụ otu ebe
Frame size bụ 26inch, oke ibu bụ ihe dị ka 19KG, ọ bụ ochie, vintage electric road bike, ọ bụ nnọọ ewu ewu site na nwa okorobịa.